Umongameli Mugabe: Abantu Badinga Ukuphephela Ngegama Lami Besithi Ngimubi
Umongameli Robert Mugabe utshele umbuthano womungcwabo kamuyi uMajor General Eliah Bandama emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngoLwesine, ukuba amazwe abalisa iBhilitani lamanye angentshonalanga, basebenzisa izizalwane zeZimbabwe ukumenza umuntu omubi, ngokubatholisa incwadi ezibavumela ukuhlala kiwo njengeziphepheli, bethi babalekela yena ikanti bona bebelenjongo yabo.
UMajor General Bandama ubhubhe ngoLwesihlanu olwedluleyo esibhedlela se West End ebulawa ngumkhuhlane wemvukuzane yegazi eye Leukemia.
Umongameli Mugabe uchaze umuyi njengomuntu obezinikele emsebenzini wakhe kusukela eseselijaha elileminyaka elitshumi lasikhombisa – 17years esiya manyana labanye empini, lalapho esesebenza esibuthweni ilizwe selithole uzibuse. Uveze ukuba udaniswa yikuba umuyi u Bamdama ubhubhe esanda nikezwa isicoco sokuba ngu Major General ethi akazange athole isikhathi sokusikholisa isikhundla lesi.
UMugabe usole ukwenza kwababalekela kwamanye amazwe anjenge Bhilitani ethi udaniswa yikwenza kwawo ukuvumela izizalwane zakuleli ezidinga ubuphepheli kiwo zicatsha ngokuthi zibalekela yena ethi ngamaqhinga wokungcolisa igama lakhe. Isimanga uthi yibo njalo abantu banye bakweleBhilitani asebeguquka bethi mazibuyele ekhaya izizalwane zakuleli ngoba eseyifezile injongo yawo yokutshumayela ivangeli yokumveza njengomuntu omubi, olocuku ebantwini abakhokhelayo.
Watshela uzulu munye kanye lenkokheli yeZanu Pf ebikulomkhosi ukuba kumele ulandelwe umzekeliso kamuyi obhubhe eseleminyaka engamatshumi amahlanu lasithupha-56,wokuzinikele ngayo yonke inhliziyo ukusebenzela ukuthuthukisa ilizwe.
Waqonqosela kudaba lokuziphatha kwabesilisa njengomuyi obengasi muntu ophonguntshintshanisa amakhosikazi yikho etshiye ikhosikazi elinye u Winnie lengane ezine,lomzukulu oyedwa. Usole abesilisa abalomkhuba wokutshaphaza abesifazane bebayekela ethi ukwenze lokho kuyisibonelo sokuba akaziphathi lowo muntu.
Emazwini akade esegwalweni angasalulandelanga, uMugabe ube sola njalo i-Melika osanda kwengezelela izijeziso ezibekelwe inkokheli yeZanu Pf. Wathi akamncengi uhulumende weMelika osebekela eleZimbabwe imigoqo kundaba zokutholisa usizo kwezokudla lemithi edingakalayo ethi uzulu weZimbabwe engaludingi lolo sizo ngoba lungasilungelanga isizwe sakuleli.
I Studio Seven ikhulumisane lozulu phezu kwenkulumo kaMugabe yezizalwane eziphephele kweleBhilitani zisebenzisa igama lakhe ngendlela engayisiyo.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Conrad Gweru oyisakhamuzi saseHarare oveze ukuba limqotho elithi bakhona abekade beqambela uMugabe amanga bengabafuna ukuthola ingcwadi ezibavumela ukuya kweleBhilitani.
Wengeza uGweru ethi okumele kuzwisiswe nguzulu yikuba kungani labo bantu babesiyadinga lezo ngcwadi okubalisa amavisa,besebenzisa igama likaMongameli Mugabe.
Ngasikhathi sinye umfowabo kamuyi okhulume emele imhuli yako Bandama,umnumzana Freddy Bandama,umchaze njengomuntu obehlakaniphile,ekhaliphile,ezithobile kodwa engumuntu ozinikela ukuthuthukisa imhuli yakhe kanye lomndeni wonke. Uthi kuyadanisa ukuba ubhubhe ngesikhathi esanda kuphutsha izifundo zakhe ze MBA okuyisibonelo sokuba ubengokhuthalela njalo ukuzithuthukisa kundaba zemfundo yaphezulu.